भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा फेरि आगलागी हुदा नौजनाको मृत्यु भएको छ – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा फेरि आगलागी हुदा नौजनाको मृत्यु भएको छ
By डिजिटल खबर Last updated Dec 23, 2019 22 0
नयाँदिल्ली – नयाँ दिल्लीस्थित एउटा कपडा गोदाममा आगलागी हुँदा नौजनाको मृत्यु भएको छ । उत्तरपूर्वी दिल्लीको किरारी क्षेत्रमा रहेको तीन तले भवनको भुँइतलामा रहेको कपडा गोदाममा आइतबार राति करीब साढे बाह्र बजे आगो सल्केको थियो । आगलागीमा दशजनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
आगलागी भएको भवनमा सुरक्षाको प्रबन्ध अत्यन्त कमजोर रहेको र साँघुरो भर्‍याङ रहेको बताइएको छ । मृत्यु हुनेमा एउटै परिवारका सदस्यहरु रहेको बताइएको छ । आगलागी खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर पड्केर भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । दुई साताभित्रै नयाँदिल्लीमा आगलागीको यो दोस्रो घटना हो ।
यसअघि ८ डिसेम्बरमा दिल्लीकै रानी झाँसी रोडमा रहेको पुरानो अनाज मण्डी बजारमा रहेको एउटा झोला र खेलौना कारखाना रहेको भवनमा बिजुलीको तार सट भएर आगालागी हुँदा ४३ जनाको ज्यान गएको थियो भने १५ भन्दा बढी घाइते भएका थिए । दिल्लीको अति नै व्यस्त बजारको साँघुरो गल्लीमा रहेको चारतले भवनमा पनि सुरक्षाका कुनै पनि प्रबन्ध थिएन ।
दिल्लीमा आगलागी घटना बढ्दै गएपछि भवनहरुको सुरक्षा प्रबन्धलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ । आइतबार राति आगलागी भएको भवनले पनि सुरक्षा मापदण्ड पुरा नगरेको आशंका गरिएको छ ।
प्याज किलोको ३ सय रुपैयाँ !
३७ करोड लागतको गुण्डु ग्राण्ड शिलान्यास, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित